Serivisy fanerena fanerena ambany amin'ny metaly - Fitaovana fanariana fantsom-pahafatesana avo lenta any China - fanariana Minghe
Inona no atao hoe Casting Pressure Low
Ny fanariana tsindry ambany dia midika fa apetraka eo ambonin'ny lovia voaisy tombo-kase ny bobongolo, ary ny rivotra voahidy dia ampidirina ao anaty vilaniny mba hiteraka tsindry ambany (0.06 ～ 0.15MPa) eo ambonin'ny vy metaly, ka miakatra ny metaly metaly avy amin'ny riser fantsona hamenoana ny bobongolo sy hifehezana ny fomba fanamafisana mihamafy. Ity fomba fanariana ity dia manana sakafo ara-tsakafo sy firafitra tsara. Mora ny manipy casting be pitsiny sy matevina tsy misy riser, ary ny tahan'ny fanarenana vy dia mety hahatratra 95%. Tsy misy fandotoana, mora mahatsapa ho mandeha ho azy. Na izany aza, lafo ny vidin'ny fitaovana ary ambany ny fahombiazan'ny famokarana. Ampiasaina matetika amin'ny fanariana firaka tsy ferrous.
Ny fanariana tsindry ambany dia fomba fanariana izay ametrahana tsiranoka ranoka ao anaty lavaka bobongolo avy any ambany ka hatrany ambony eo ambany fanerena, ary mihamafy eo ambanin'ny tsindry hahazoana castings. Ny vata famaranana voaisy tombo-kase dia feno rivotra maina voadidy na entona tsy mitohana. Miaraka amin'ny fanampian'ny tsindry miasa eo ambonin'ny vy metaly, ny metaly anidina dia mameno tsara ny bobongolo miaraka amin'ny fantsom-panafody avy any ambany ka hatrany ambony amin'ny alàlan'ny mpihazakazaka. Ny tsindry famenoana amin'ny ankapobeny dia 20 ～ 60kPa. Rehefa mihamafy tanteraka ny fanariana azy dia mivoaka ny tsindry entona amin'ny velaran-drano, hany ka ny metaly metaly tsy miorina ao anaty fantsom-pisondrotana sy ny mpihazakazaka dia mivezivezy mankamin'ny lohan'ny lanjany avy eo, sokafana ny bobongolo ary ny fanariana avoaka.
Ny fizotry ny famokarana fanariana tsindry ambany dia ahitana ireto fomba fanao efatra manaraka ireto:
- Fitrohana vy sy fanomanana lasitra na bobongolo.
- Fiomanana alohan'ny handraraka: ao anatin'izany ny famehezana amin'ny lafaoro (fonosana famehezana mety), ny fanesorana ny fantsom-bozaka amin'ny fantsom-piakarana, ny refin'ny haavon'ny rano, ny fitsapana famehezana, ny fitoviana amin'ny bobongolo, ny bobongolo na ny bobongolo, sns.
- Araraka: ao anatin'izany ny fanondranana ranon-javatra, famenoana, fanerena, fanamafisana, fanamaivanana ny tsindry ary fanamafisana sns.
- Demoulding: ao anatin'izany ny famolavolana sy ny famoahana azy.
Ny fampiharana ny fanerena fanerena ambany
Ny famoahana tsindry ambany dia teknolojia fanariana herisetra voalohany indrindra, ary nampiasaina tamin'ny famokarana indostrialy hatramin'ny taona 1940. Ny famoahana tsindry ambany dia famonoana maty tsotra izao, ary ny ampahany tsy voasedra dia afaka mampiasa io fomba io. Amin'izao fotoana izao, ny fanariana tsindry ambany dia be indrindra ampiasaina mba hamokarana firaka aliminioma sy firaka magnesium, toy ny kodiarana fiara ao amin'ny indostrian'ny fiara, ny varingarina, ny lohan'ny varingarina, ny piston, ny akorandriam-balafomanga, ny impeller, ny kodiarana fitarihan'ny rivotra ary ny fanariana hafa misy endrika sarotra sy fitakiana kalitao avo lenta amin'ny indostrian'ny fiara.Raha ny fanerena tosika ambany dia ampiasaina hamokarana vy vy, toy ny kodiarana vy, ny pipa riser dia mila vita amin'ny fitaovana marefo manokana. Ny fanerena fanerena ambany dia azo ampiharina amin'ny fanariana firaka varahina kely ihany koa, toy ny fantson-tsolika, paompy akoho ao amin'ny efitrano fidiovana, sns.
Ny mampiavaka ny fanerena fanerena ambany
Ny fanariana tsindry ambany dia afaka mampiasa fasika, vy, grafit, sns. Ny fizotran'ny famenoana dia tsy mitovy amin'ny fanariana hery misintona toy ny fanariana vy sy famafazana fasika, ary tsy mitovy amin'ny fanerena tsindry ihany koa amin'ny tsindry avo sy famenoana hafainganam-pandeha. Manana ireto tombony manaraka ireto izy:
- Ny famenoana metaly metaly metaly dia manatsara ny fahadiovan'ny casting. Koa satria mitsingevana ambonin'ilay metaly anidina ilay slag an-idina, ny fanariana tsindry ambany dia feno metaly anidina ao amin'ilay faritra ambany ao anaty vilaniny amin'ny alàlan'ny fantsom-panafody izay misoroka tanteraka ny mety hisian'ny mason-koditra miditra ao amin'ny lavaka bobongolo .
- Ny famenoana metaly ranoka dia miorina, mampihena na misoroka ny fikororohana, ny fiatraikany ary ny famafazana ny metaly ranoka mandritra ny famenoana, amin'izay mampihena ny fiforonan'ireo salama mihombo.
- Ny famolavolana manana formability tsara. Ny metaly metaly dia nofenoina eo ambanin'ny tsindry, izay afaka manatsara ny fihenan'ny metaly anidina, izay manampy amin'ny fananganana casting miaraka amina faritra mazava sy ambonin-javatra malama, ary mahasoa kokoa amin'ny famolavolana filan'ny rindrina matevina.
- Ny fitaratra dia manjary mihombo ary mihamafy eo ambanin'ny tsindry, izay azo fahanana tanteraka ary matevina ny firafitry ny fanariana.
- Hatsarao ny vokatra vy metaly. Amin'ny toe-javatra mahazatra dia tsy ilaina ny riser, ary ny metaly tsy misy famerenam-bidy ao amin'ny fantsom-panafody dia azo averina am-patana ho an'ny fampiasana miverimberina, izay manatsara be ny vokatra vy metaly. Amin'ny ankapobeny hatramin'ny 90%,
- Famokarana sy fiasa mora azo, fepetra miasa tsara, fahombiazan'ny famokarana avo lenta, mora mahatsapa mekanisation sy automation,
- Ny fanariana tsindry ambany dia misy lesoka ihany koa, ny fitaovana ary ny fampiasam-bolan'ny bobongolo dia somary lehibe; amin'ny famokarana fanariana firaka aliminioma, ny fantsom-boaloboka sy riser dia mifandray amin'ny vy metaly mandritra ny fotoana maharitra, izay mora tohina sy harafesina, izay hahatonga ny vy metaly hampitombo vy sy hanaratsy ny zava-bita.
Sehatra famokarana karazany samihafa amin'ny famoahana tsindry ambany
Fivarotana fanerena fanerena ambany 1 ▶
Fivarotana fanerena fanerena ambany 2 ▶
Fivarotana fanerena fanerena ambany 3 ▶
Fivarotana fanerena fanerena ambany 4▶
Fivarotana fanerena fanerena ambany 5▶
Milina fandefasana multifunctional sy milina fanoratana▶
Ny vokatra vita amin'ny alimika dia fitaovana enti-mamono ▶
Masinina fanerena fanerena tosika ambany-milina akorandriaka▶
Masinina mandatsaka tsindry ambany▶
Vatana fanodinam-bokatra fanodinam-bokatra ambany▶
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny fanerena fanerena ambany
Safidio ny mpamatsy fanerena fanerena ambany indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany amin'ny fanerena fanerena ambany dia aondrana any Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Ny serivisy fanamboarana fanerena tsindry ambany fanao dia manome filatsahana maharitra sy mora vidy izay mifanaraka amin'ny antsipirihanao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina, ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny vahoakanay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa fanariana tsindry ambany.